Download Lockheed P-3C Orion FSX & P3D - Freeware
Penti P-3C Lockheed Orion FSX & P3D
pịa ebe a na-FS2004 nanị dakọtara vesion.
Obi dị anyị ụtọ ịmebata Orion P-3C, ụgbọ elu ndị agha akụkọ mgbe ochie, nke ndị otu FS KBT gosipụtara. Lockheed P-3 Orion bụ ụgbọ elu na-eche ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na helikopta anọ n'ụwa. P-3 Orion bu ihe ndi agha sitere na ugbo elu obodo Lockheed L-188 Electra gbapuru oru. (isi mmalite: wikipedia)
Mputa na ise ihe nke a nlereanya e kere ọzọ nju karịa (V29) aga na-arụ ọrụ. Karịsịa, isi nku mmekọrita (flaapu na engine nasser, wdg) bụ ọhụrụ aghụghọ. Ọtụtụ iche iche nke P-3C A kwadebere dị ka nke na-anọchi P-3C na bụ n'oge mgbanwe now. Ọ bụ itoolu na ụdị na mkpokọta.
ikenyeneke mbiet add-on ya na akwa 3D zuru oke na ngwa ọdịnala. Elkpụzi ụdị dị elu, ịchọpụta ọtụtụ ederede dịka NAVY na Canadian Air Force. Ihe ngosi nke ụgbọ elu dị adị n'ezie. Na mgbakwunye, ụgbọ elu a jupụtara na ihe ịtụnanya, dịka ịtụ bọmbụ na ọrụ ndị ọzọ pụrụ iche. O nwere ihe ọ bụla nke ụgwọ ịkwụ ụgwọ, mana anaghị akwụ ụgwọ.
Emelitere na 01 / 12 / 2018 : Ugbu a kwekọrọ na Prepar3D v4 +, Auto-installụdị 10.5.
Emelitere na 05 / 07 / 2016 : Versiondị ọhụrụ 3.31 dakọtara na DirectX10 na ndị ọzọ, Auto-installụdị 10.
downloads 38 907
kere 23 Feb 2009
emelitere 30 Nov 2018